true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 7 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Kukhona enye into eyenzekayo lapho abantu benza i-overt okuchaza okuningi ngokuziphatha komuntu. Kwi-Scientology, lokhu kubizwa ngokuthi i-overt–motivator sequence.
Ngenkathi isenzo esiyingozi esenziwa ngumuntu komunye sibizwa ngokuthi yi-overt, isenzo esiyingozi esitholwe ngumuntu sibizwa ngokuthi i-motivator. Ibizwa ngokuthi “i-motivator” ngoba “iya-motivator,” inika lowo muntu isizathu noma ubulungiswa bokwenza ama-overts.
Umuntu othole i-motivator angabheka ukuthi unesizathu esihle esanele sokuthi enze i-overt engaphezulu kwalowo esimhlukumezile. Kepha futhi, lapho enza isenzo esivelele ngaphandle kokuthi esethole i-motivator, uzama ukuthola noma ukuphupha i-motivator ukuthi achaze noma athethelele isenzo sakhe esiyingozi. Uzohlala ekholwa noma aqambe amanga athi kwenzeke into embi kuye, noma kungenzekanga.
Lapho ubhekene nama-overts nama-motivator, abantu bavame ukuthola imibono engamanga ngalokho okwenzekile ngempela. Ukwenza isibonelo, umuntu angazula ekholwa ukuthi uyena ohlaselwe yingozi yemoto kanti empeleni uyena obangele ingozi. Noma angakholelwa ukuthi ubangele ingozi kanti empeleni wayengu-kuphela ko-yedwa.
Yithi uma u-Joe eshaya u-Bill, u-Joe manje ukholwa ukuthi kufanele ashaywe ngu-Bill. Okubaluleke kakhulu ukuthi empeleni angathola izinhlungu zomzimba noma ukungakhululeki ukukhombisa ukuthi ushaywe u-Bill, yize u-Bill engazange amshaye. Futhi abantu bese behamba bezitshela ukuthi bashaywe kanjani u-Bill, washaywa u-Bill, washaywa u-Bill, futhi yize kungenzekanga, abanye abantu bazophikelela ngokuthi kwenzekile.
Lokho yi-overt–motivator sequence.